Polisy: Miampy 1098 ireo amperinasa
Navoaka tamin’ny fomba ofisialy ny zoma 19 jolay 2019 teto amin’ny ENIAP Antsirabe ny andiany faha-25, ho an’ireo mpianatra ho Polisy mandrafitra ny andiany « FENITRA ».
« Inspecteur de Police » ny 99 tamin’ireo notolorana galona rehefa nandalo fiofanana nandritra ny 12 volana, ka vehivavy ny 08 amin’izy ireo, ary 91 kosa lehilahy. Nahatratra 999 kosa ireo « Agent de police » izay nahitana vehivavy 94 ary lehilahy 905.
22 taona no zandriny indrindra, raha 44 taona kosa no zokiny indrindra amin’izy ireo.
Notontosaina teto amin’ny sekoly ihany koa ny fandraisana fibaikoana ho an’ny Talem-paritry ny filaminam-bahoaka vaovao miisa efatra, dia ny Commissaire de Police Rafalimanana Alain Adolys ho an’i Bongolava ; ny Commissaire de Police Rakotoniaina Bonalala Christien ho an’i Itasy ; ny Commissaire Principal de Police Razafindrazaka Hector ho an’Analamanga ary ny Commissaire Principal de Police Randriamasoa Pascal ho an’i Vakinankaratra.
Hiasa ao Antananarivo sy ny manodidina avokoa aloha ireo Polisy ireo hiomana amin’ny fandraisana ny Papa Ray Masina raha ny nambaran’ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny Contrôleur Général de Police Rafanomezantsoa Roger, izay tonga nanotrona izao fotoan-dehibe izao.